Nampandoavin’ny fitsarana rosiana noho ny ‘famakiana hafatr’olona manokana’ ao amin’ny Gmail ny Google · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2015 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Magyar, Italiano, русский, 한국어, Français, English
Nanapaka ny fitsarana rosiana iray fa manitsakitsaka ny zon'ny olona hanana fifandraisan'olona an-takonana ny dokambarotry ny google mahita lasibatra. Saripika: Imailaka avy amin'i Martha Ormiston sy fanarahamaso video avy amin'i Ji Lee avy ao amin'ny Noun Project [tetikasa anarana iombonana]. Namboarin'i Tetyana Lokot.
Namoaka didy ny fitsaranan'ny tanànan'i Moskoa fa mila mandoa 50.000 robla ($ 765) ny Google noho ny ‘fanitsakitsahana ny mahatsiambaratelo ny taratasy ifandraisan'olona‘ amin'ny alalan'ny fampiasana doka an'aterineto mahita lasibatra izay mifototra amin'ny votoatin'ny kaonty Gmail-n'ny mpiserasera.
Anton Burkov, mponina ao Yekaterinburg, no nanapa-kevitra ny hitory ny vondron'orinasa Google teo am-piandohan'ny taona 2015 rehefa niahiahy izy fa mamaky ny taratasiny manokana ny orinasa. Teo ampandefasana mailaka ho an'ny namany amin'ny fisakany handeha lavidavitra ho an'ny amin'ny Fitsarana eoropeana misahana ny zon'olombelona i Burkov, lefitry ny lehiben'ny sampandraharaha eoropeanina misahana ny lalàna ao amin'ny Oniversite mahaolombelona Yekaterinburg, no nahatsikaritra ny dokambarotra hifampiraharaha amin'ny trano fandraisam-bahiny ao Strasbourg sy servisy fakana visa.
Tena tsinahy mihitsy no nahitako izany, hitako fa amin'ny ankavanan'ny imaila rehetra misy dokambarotra ary tsikaritro fa miaty rakitahiry avy amin'ny taratasiko izy ireo. Noho izany ny milina mpanoabaikon-dry zareo dia namboarina hanangona vaovao momba ny mpiserasera sy hamoaka dokambarotra mifandraika amin'izany.
Tamin'ny 21 Aprily, 2015, ny fitsaranan'ny distrikan'i Moskoa nandà ny fandraisana ny fitorian'i Burkov, fa niakatra ambaratonga avo kokoa niakatra fitsarana ambony ilay mpiserasera, nilaza fa nanitsakitsaka ny zo hita ao amin'ny lalampanorenana fitandroana ny tsiambaratelon'ny taratasy ifandraisana ny Google. Amin'izao fotoana izao ny fitsarana ny tanànan'i Moskoa nanapaka nirona nankany amin'i Burkov, kanefa ny any nomarihan'ny sampana misahana ny fampitam-baovao ao amin'ny fitsarana dia nanonona fotsiny ny onitra 50.000 robla fa tsy nomarihana manokana kosa raha hampiharina na tsia ny fangatahan'i Burkov voalohany: dia ny handraràna ny Google tsy hampiasa torohay avy amin'ny taratasy ifandraisan'ny mpiserasera.
Ny fifanarahana amin'ny fampiasana ny Gmail sy ny politikan'ny fiainana an-takonana dia efa manazava amin'ny antsipirihany ny karazana rakitahirin'ny mpiserasera sy ny torohay angonin'ny servisy. Tafiditra ao anatin'izany ny fampahafantarana manokana omen'ilay mpiserasera teo ampisoratana anarana hanokatra kaonty Google, sy ny voambolana nampiasaina hanaovana fikarohana, ny mombamomba ny fitaovana ampiasaina (ny maodeliny, ny rafitra mampiasa azy, sns.) ary ny rakitahiry hafa, toy ny toerana. Etsy andaniny, eo amin'ny fizarana miresaka ny “Doka ao amin'ny Gmail” ao amin'ny tranonkalam-panohanana no nanamarihan'ny Google hoe: “Efa mandeha ho azy manontolo ny dokambarotra mahita lasibatra ao amin'ny Gmail, ary tsy misy olombelona mamaky ny imailakanao na ny fampahafantarana ao amin'ny kaonty Google mba hampisehoany dokambarotra na fampahafantarana hafa misy ifandraisana [amin'izay nosoratanao]. “
Mbola tsy naneho hevitra amin'izay hamaliana amin'ny didim-pitsarana na ny onitra ny Google hatreto. Tamin'ny Avrily ny mpitondrateny iray avy ao amin'ny Birao Rosianan'ny Google (ООО “Гугл”) niteny tamin'ny RIA “Novosti” fa tsy tompon'andraikitra amin'ny servisy Gmail ny orinasa rosiana, ary izay fitarainana rehetra dia tokony nalefa any amin'ny Google Inc any Etazonia.